Ogaden News Agency (ONA) – shirwaynihii faraca Gauteng South Africa oo guul kusoodhamaaday
shirwaynihii faraca Gauteng South Africa oo guul kusoodhamaaday
Posted by ONA Admin	/ April 1, 2013
“HAWSHII ZABAN-HORE LOOMA KALAHADHIN”
31/03/2013 waxaa magaala madaxda dalka south Africa ee Pretoria kuqabsoomay shirkii sanadlaha ahaa ee jaaliyada ogadeniya faraceeda Gauteng.
Shirkan waxaa kasoo qeybgalay boqolaal katirsan xubnaha faraca. Kulankan sanadlaha ah oo aad loogasoo shaqeeyay agaasinkiisa ayaa lagu falanqeeyay hawlaha jaaliyada u yaala. Waxaa sidookale lagu qiimeeyay shaqadii sanadkii dhamaaday halkaas oo ay maamulki shaqada hoggaaminayay sanadkii tagay ay soo bandhigeen wax qabadkii maamul ee faraca Jaaliyada Gauteng.
Sanadkii hore waxaa diirada lasaaray wax qabadka dhinaca dhaqaalaha iyo abaabulka. Waxaana qiimeynti warbixineed ee lasoo gudbiyay xubnuhu hoosta kaxariiqeen horumar lagu naaloonkaro oo ay guud ahaan gaadhay jaaliyadu gaar ahaana amaan wayn lagu siiyay faraca oo lasheegey in xubno iyo hawl wadeenaba ayna ukala hadhin shaqadii sanadkii lasoodhaafay.
Waxaana halkaas lagu gudoonsiiyay abaal marinoo xubno badan oo shaqawanaag iyo dadaal dheeri ah muujiyay sanadkii tagay.
Intaas kadib waxaa la doortay gudiyadii shaqada sanadkan qabanlahayd waxaana xubnuhu doorteen 6 xubnood oo shaqada sanadkan loo igmaday. Maamulka cusub ayaa halkaas muujiyay iyaguna dhankooda niyad wanaag iyo kalsooni iyagoo kuballan qaaday inay halkaas kasiiwadayaan horu marki gudidii kahoraysay keeneen iyagoo aad carabka ugu dhuftay in ay labajibaarayaan dadaalkooda Inshallaah.
Ugudanbayntii wuxuu shirku kusoo gabagaboobay ballan iyo beeco cusub oo xubnuhu gacmaha iskuqabsadeen inay sanadkan guntiga dhiisha isaga dhigaan si loo soo dadajiyo xorriyada ogadeniya
Xafiiska Wakaalada Wararka Ogadeniya ee South Africa.